स्वास्थ्य पेज » कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? कुन उमेरका मानिस कति घण्टा सुत्ने ? – स्वास्थ्य पेज
शरीरलाई स्वस्थ्य राख्नको लागि स्वास्थ्य खानपानसँगै निन्द्रा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अनिदोका कारण मानिस स्वास्थ्य रहन सक्दैनन् । कम सुत्नुका कारण गुम्सावट, टेन्सन र चिडचिडापनजस्ता समस्या देखिन सक्छ ।
६५ वर्षभन्दा माथिका दैनिक ७ देखि ८ घन्टा
“यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ जीवन चाहनुहुन्छ भने मीठो निद्रामा समय खर्च गर्नुहोस्,”